विमानस्थलमा आस्था राउतलाई प्रहरीले ज्याकेट खोल भनेपछि...
२०७६ माघ २ बिहिबार, उनले, प्रहरीका ठूला पोष्टमा बस्नेहरुलाई मात्र हजुर हजुर भनेर सम्बोधन गर्ने तर साधारण जनतालाई सम्मान नगर्ने बानी हटाउन नेपाल प्रहरीसँग आग्रह गरेकी छिन् । आस्थाले भिडियोमा भनेकी छिन्–‘यो नेपाल प्रहरीको जरामा नै गन्ध छ । माथि टुप्पाबाट दर्शन, यत्रो…दर्शन । कस्तो दर्शन हो यो । मलजल गर । जरा नै कुहिएको छ ।’ ... बाँकी अंश»
छोरालाई आत्महत्याबाट रोक्न सकेनन् कबीर बेदीले, 'सुसाइड नोट' पढेपछि परे छक्क
२०७६ माघ २ बिहिबार, काठमाडौं । सम्भवतः संसारका कुनै बुबा आफ्ना छोराको शव बोक्न चाहँदैनन्। उसको मृत्यु चहादैनन् । तर अभिनेता कबीर बेदीले आफुलाई उठाउने मान्छे गुमाए । उनले आफ्नो छोरालाई आत्महत्या गर्नबाट रोक्न सकेनन् । बुधबार कबीर बेदीको जन्मदिन हो। ... बाँकी अंश»
'द रक' का बुबा रकी जोनसनको मृत्यु, यसरी बने ८० को दशकका चर्चित रेसलर
२०७६ माघ २ बिहिबार, रकी जोनसनको जन्म २४ अगस्त १९४४ मा क्यानाडामा भएको थियो। कमै उमेरमा उनले राष्ट्रिय कुश्ती एलायन्समा सामेल भए । रोकीका तीन सान्तान छन् - ड्वेन, कर्टिस र वान्डा बाउल्स। आफ्नो बुबाले जस्तै, ड्वेनले रिंगबाट आफ्नो क्यारियर शुरू गरे। ड्वेन डब्ल्यूडब्ल्यूई र डब्ल्यूडब्ल्यूएफ मा 'द रक' को नामबाट परिचित थिए। ... बाँकी अंश»
कबीर बेदीले छोरीभन्दा ४ बर्ष कान्छी अभिनेत्रीसँग गरेका थिए चौथो विवाह
२०७६ माघ १ बुधबार, परवीन कबीर बेदीकी छोरी पूजा बेदीभन्दा ४ बर्ष कान्छी छिन। परवीन र कबीरको लण्डनमा पहिलो भेट भयो। परवीनको परिवार कबीरसँग बिहे गर्न तयार थिएनन्, तरपछि सबै राजी भए। परवीन र कबीरको गुरुद्वारमा बिहे भएको थियो। दुबै परिवारका सबै आफन्त र साथीहरू विवाहमा सहभागी थिए। ... बाँकी अंश»
रक्सी नपिउने शाहरुखले पिएरै सिद्धाए यो चलचित्र, ऐश्वर्याको कानबाट निस्कियो खुन
२०७६ माघ १ बुधबार, शाहरुख खानले सिल्वर स्क्रीनमा आफ्नो भुमिकालाई यथार्थपरक देखाउन बिशेष ध्यान दिएका थिए।उनले कयौ सीन्सलाई महसुस गराउन रक्सी पिएका थिए। भारतिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार शाहरुखले सुटिंग भन्दा पहिले केहि प्याक लिने गरेका थिए । शाहरुख सामान्यता रक्सी पिउदैनन् । ... बाँकी अंश»
६० करोडको बंगला, सय करोडको निजी जेट यस्तो छ अजय देवगनको जीवन
२०७६ पौष २९ मंगलबार, सम्पत्तिको कुरा गर्ने हो भने अजयसँग आफ्नै निजी जेट छ। उनीसँग संसारकै सबैभन्दा महँगो कारहरू छन्। अजय देवगनसँग २६० करोड भारतीय रुपैयाँको सम्पत्ति रहेको छ । २०१८ मा उनको वार्षिक आय ३२ करोड थियो। अजय देवगनले दुई वर्षमा १०० करोडभन्दा बढी कमाई गर्ने फिल्महरु दिएका छन्। जसमा रेड, गोलमाल अगेन, टोटल धमाल जस्ता फिल्महरू छन्। ... बाँकी अंश»
कल्पनाले पहिरिइन् ‘मम्मी डान्स प्रतियोगिता’ को ताज
२०७६ पौष २७ आइतबार, बुटवल । रुपन्देहीको सैनामैनामा आयोजित मम्मी डान्स प्रतियोगिताको ताज कल्पना डुम्रे ज्ञवालीले जितेकी छिन् । ... बाँकी अंश»
'इन्गेजमेन्ट' पछि पनि छुट्टिए अश्मित पटेल र मेहक चहल
२०७६ पौष २७ आइतबार, मेहकले अश्मितबाट छुट्टिएको मुम्बई टाइम्सलाई बताएका छन्। उनले भने, 'मैले अश्मितलाई छोडेको छु। मैले यो निर्णय गर्नुपर्यो र म यो सम्बन्धबाट बाहिर आएँ। ' अश्मीतले पनि यस बारेमा भनिन्, 'यो सत्य हो कि हामी अब सँगै छैनौं। म यस विषयमा हाम्रो गोपनीयताका लागि अनुरोध गर्दछु र यसमा थप टिप्पणी गर्न चाहन्न। ... बाँकी अंश»
अनि शाहरुखले कुटे ज्वाइ !
२०७६ पौष २५ शुक्रबार, यसबाट शाहरुख खान उनीसँग धेरै रिसाए। यस अघि शाहरुखले फिल्म 'तीस मार खान' मा अभिनय गर्न इन्कार गरेका थिए। शाहरुखलाई फिल्मको कथा मन परेन । त्यसबेलादेखि शिरीष र शाहरुखले एक अर्कालाई मन पराउन छाडे। ... बाँकी अंश»
नाना पाटेकर र आसाराम उस्तै, करोडौं रुपैयाँ हिनामिनाको आरोप
२०७६ पौष २४ बिहिबार, नानालाई धोखाधड़ीको आरोप लगाउँदै तनुश्रीले भनिन्, 'नानासँग नाम फाउण्डेशन मार्फत संकलन गरिएको पैसा छ। उनी किसानहरूको उद्धारका लागि कर्पोरेट क्षेत्रबाट करोडौं रूपैयाँ लिन्छन्। के तपाईंलाई थाहा छ उनीहरूले किसानहरूमा खर्च गर्छन् कि गर्दैनन्?' ... बाँकी अंश»
प्रीति, रुपा र गोपालजंगले नचाएका दर्शकलाई प्रकाश सपुतले भावुक बनाए
२०७६ पौष २४ बिहिबार, वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा प्रदेशिएका श्रीमान् बित्दाको पीडालाई गीतमार्फत गायक सपुतले सुनाए । ... बाँकी अंश»
मोटोरोला कम्पनी छोडेकासँग आयो फराह खानको दिल
२०७६ पौष २३ बुधबार, काठमाडौं । बलिउडकी प्रसिद्ध निर्देशक तथा कोरियोग्राफर फराह खानको ९ जनवरीमा जन्मदिन हो । फराह आफ्नो शान्त स्वभावको लागि परिचित छिन्। फराहले निर्देशकको शुरुआत फिल्म 'मे हुँ ना' बाट गरेकी हुन्। यस अघि उनी बलिउड फिल्महरूमा कोरियोग्राफरको रूपमा काम गर्थिइन्। 'मे हूँ ना' पछि फराह खानले 'ओम शान्ति ओम', 'तीस मार खान' र 'ह्याप्पी न्यू ईयर' जस्ता फिल्महरू निर्देशित गरिन् । ... बाँकी अंश»
प्रियंका कार्की र आयुसमानको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
२०७६ पौष २३ बुधबार, काठमाडौं । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रको आफ्नो राम्रो पहिचान बनाई दर्शक र श्रोताको मनमुटुमा बस्न सफल सुमधुर स्वरकी धनी लोकप्रिय गायिका अञ्जु पन्त र गायक नरेश बुढाथोकीको स्वरमा ‘कान्छी हो कान्छी’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ... बाँकी अंश»
जेएनयू मामिलामा अमिताभ र अभिषेकको आलोचना
२०७६ पौष २३ बुधबार, किलर बीनले अमिताभ बच्चनले पाएको लिखित दादासाहेब फाल्के पुरस्कारमा व्यंग्य गर्दै लेखे , 'अब बोल्नु सर, पुरस्कार पनि प्राप्त भएको छ।' अर्का एकले लेखे , 'बोल रिसाह बूढा मानिस, आफ्नो मुख खोल्नुहोस्, कतिन्जेल तपाईं चुप रहनुहुनेछ। जमीरले फिल्ममा काम गर्नुभयो, तर जामीर कहाँ छ? यी बाहेक अन्य धेरै सोशल मीडिया प्रयोगकर्ताहरूले पनि ट्वीट गरेर अमिताभ बच्चन र अभिषेकलाई ट्रोल गरेका छन्। ... बाँकी अंश»
'भिनाजु' भनेका करण जौहरसँग अजय देवगनले सालीको भागबन्डा खोजेपछि...
२०७६ पौष २२ मंगलबार, कपिलले उनलाई सोधेका थिए ' सुनिन्छ काजोलका श्रीमान् अजय देवगनलाई तपाई भिनाजु भन्नुहुन्छ।' यस प्रश्नको जवाफ दिँदै करण जौहरले भनेका थिए, 'मैले अहिलेसम्म त भनेको छैन, तर यो राम्रो आइडिया हो , अब म भोली बिहान सन्देश पठाउनेछु 'अजय भिनाजु ' लेखेर । ... बाँकी अंश»
अमीषालाई आमाले कुटेर निकालिन‍् घरबाट, बुबामाथि १२ करोडको आरोप
२०७६ पौष २१ सोमबार, नेस वाडियापछि अमीषाको नाम निर्देशक-निर्माता विक्रम भट्टसँग जोडिएको थियो । तर, घरपरिवारले भने उनको यो सम्बन्धलाई रुचाएका थिएनन् । अमीषाले सञ्चारमाध्यममा दिएको एक बयानमा उनलाई आफ्नी आमाले चप्पलले पिटेर घरबाट निकालिदिएकी थिइन् । तर, अमीषा र विक्रमको सम्बन्ध भने लामो समय टिक्न सकेन । सन् २००८ मा उनीहरुको ब्रेकअप भएको थियो । ... बाँकी अंश»
सलमान र कट्रिना पुगे विवाहमा !
२०७६ पौष २० आइतबार, काठमाठौं । बलिउड स्टार सलमान खान र कट्रिना कैफ विवाहमा पुगेका छन् । हालसालै कट्रिना कैफ गोवामा पुगिन्। ... बाँकी अंश»
दीपिकालाई सुपरस्टार बनाएका पाँच चलचित्र
२०७६ पौष २० आइतबार, रामलीलाबाट दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंहको प्रेमकहानी यो फिल्मबाट सुरु भएको थियो । अहिले यो जोडीले विवाहसमेत गरेको छ भने बलिउडको सबैभन्दा लोकप्रिय जोडी बन्न पुगेको छ । यो फिल्मको लागि पनि कट्रिनालाई पहिलो प्रस्ताव गएको थियो तर उनले त्यसका लागि अस्वीकार गरेकी थिइन् । ... बाँकी अंश»
महेश भट्टको छोरासँग दुश्मनी,आलियाका दाईले कुटे पूजाको प्रेमी
२०७६ पौष १८ शुक्रबार, आलिया, पूजा र शाहीनको बारेमा महेश भट्ट प्राय कुरा गर्छन् । तर छोराको बिषयमा कुरा गर्दैनन् । महेश भट्टले पहिलो विवाह लोरेन ब्राइटसँग गरेका थिए । विवाहपछि लोरेनले आफ्नो नाम किरण भट्ट राखेकी थिइन् । किरणको दुई सन्तान भए । छोरी पूजा भट्ट र छोरा राहुल भट्ट। पछि महेश भट्ट अभिनेत्री सोनीसँग प्रेममा रहे । सोनीबाट उनको दुई छोरी भए । शाहीन र आलिया। आलिया भट्ट परिवारको सबैभन्दा कान्छी छोरी हुन् । ... बाँकी अंश»
रणवीरले लिए श्रीमतीको घरमा कोठा, भाडा ३४ करोड १५ लाख
२०७६ पौष १७ बिहिबार, रणवीरले सो फ्ल्याट तीन बर्षको लागि लिएका छन्। यस फ्ल्याटको एक महिनाको भाडा ९ लाख ४८ हजार नेपली रुपैयाँ रहेको छ। उनले तीन बर्षमा ३४ करोड १५ लाख बराबर तिर्नुपर्नेछ । रणवीरले आफ्नै लागि वा केही कामका लागि यो फ्ल्याट लिएका हुन् त्यसबारे केहि बताएका छैनन् । ... बाँकी अंश»